5 -ta astaamood ee ugu muhiimsan Telegram -ka 2016 | Androidsis
Shalay un baan daabacaynay gal aan ku ururinay shanta war ee ugu wanaagsan WhatsApp-ka 2016. Sannad dhammaad ku dhow oo waliba aad u dhammaystiray mid ka mid ah tartamayaasha tooska ah ee WhatsApp: Telegram. Telegram ayaa ururiyey xadhig weyn oo war ah, inkasta oo ay si gaar ah ugu dhexjiraan kutub sheeko yar yar oo si weyn kor ugu qaaday khibrada isticmaale ee heer guud.
Marka hadda waxaan ku soo laabaneynaa 5-tii war ee ugu fiicnaa Telegram oo ay ka mid yihiin kuwa soo baxay awood u dirista GIF-yada firfircoonaan. Tani waa mid ka mid ah astaamaha noo ogolaaday inaan ku raaxeysano Telegram sida barnaamij kale oo sheekeysi ah, gaar ahaan awoodda loo leeyahay raadinta kuwa fiidiyowga ah ee yar yar si aan ula macaamilno ulana xiriirno asxaabteena, qoyskeena iyo xiriiradayada sida ugu macquulsan. oo aan loo baahnayn in eray la qoro. Kaliya kuma ekaanin shantaan astaamood ee cusub, laakiin waan helnay tirtireyaasha, muuqaal deg deg ah, sheekaysiga ku xirnaanta iyo xitaa isdhexgalka IFTTT ee barnaamijka sheekaysiga dhiirrigelinta dad badan oo badan sida WhatsApp lafteeda.
1 Gifs dhaqdhaqaaq leh
2 Noocyada 2.0
3 Ciyaaraha HTML5
5 Supergroups of 5.000 isticmaalayaasha iyo qalabka anti-spam
Gifs dhaqdhaqaaq leh
Muuqaalka ugu wanaagsan sanadkan ee Telegram ayaa ahaa GIF-yada firfircoon. Kaliya kuma ekaanin inay dirto GIF-yada firfircoon, sida WhatsApp ay sameyso, laakiin sidoo kale waxay soo jeedineysaa raadinta iyaga dhanka calaamadda ku taal. Xarun weyn oo lagu helo GIF-kaas oo noo oggolaanaya inaan saaxiib la qosolno ama aan muujino xanaaqeenna markaan raadinno eray la mid ah muujintaas.
Haddii aad leedahay kooxo-kooxeedyo ka mid ah kuwa ugu fiican ee waxqabadka Telegram, samee bots qaar baa maqan kuwaas oo noo ogolaanaya dhexgal qalabka qaarkood sida salaanta kuwa isticmaaleyaasha cusub ee soo galaya inay kaqeybqaataan koox leh tiro badan oo isticmaaleyaal ah. Sida caadiga ah, Telegram waxaa ku jira bots loogu talagalay cayaaraha, raadinta YouTube-ka ama GIF-yada firfircoon. Sikastaba, waxaa jira kuwa kale oo badan oo sugaya in loo isticmaalo in lagu daro iyaga barnaamijkan wada sheekaysiga weyn.
Bilihii la soo dhaafay waxaan helnay imaatinka Ciyaaraha HTML5 ilaa Telegram. Kuwani waxay noo oggolaanayaan inaan ciyaaro ciyaaro aan caadi aheyn si loola wadaago dhibcaha la helay loona khiyaameeyo inta kale ee xubnaha kooxdaas supergroups. Guddiga hoggaanka ayaa soo muuqan doona mar kasta oo aan ciyaar ciyaarno, sidaa darteed waxaan yeelan doonnaa dhiirigelin dheeraad ah oo aan ku sii wadi doonno inaan ciyaarno liistadaas gaaban ee ciyaaraha Telegram.
Xusuus-qorradu waa hubaal mid ka mid ah wararka ugu kooban, laakiin ka xiiso badan. Daaran koox-kooxeedyo kumanaan ah oo adeegsadayaal ah, inaad awood u yeelatid inaad adeegsato calaamadda calaamadeynta si aad uga xulato mid ka mid ah xubnaha liiska liiska ayaa ka badan faa iidada iyo muuqaalka weyn laftiisa. Isla marka isticmaale lagu sheego sheekada, ogeysiin ayaa soo muuqan doonta oo u sheegaysa inuu qof la soo xiriiray koox gaar ah.
Supergroups of 5.000 isticmaalayaasha iyo qalabka anti-spam
Telegram ayaa kordhay tirada dadka isticmaala laga bilaabo supergroups ilaa Isticmaalayaasha 5.000 sannadkan 2016. Sidan oo kale waxaad ku yeelan kartaa bulshooyin iyo kooxo leh kumanaan isticmaale, taas oo Telegram siisay hay'ad kale oo caan ah. Kooxahan supergroup-yada waxaa lagu dhexdhexaadin karaa aalado si gaar ah loogu abuuray iyaga oo markaa la dagaallamaya spam-ka ay sababi karaan qaar ka mid ah adeegsadayaasha doonaya inay ka faa'iidaystaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 5-ta war ee ugu wanaagsan Telegram ee sanadka 2016